पुरानो राइनबेक एरोड्रोम डाउनलोड गर्नुहोस् FSX & P3D - फ्रीवेयर
पुरानो राइनबेक एरोरोम FSX & P3D
ओल्ड राइनबेक एरोड्रोम पहिलो विश्व युद्ध र गोल्डन एज ​​विमान र एन्टिक मोटर वाहनहरूको संग्रहालय हो जुन अमेरिकाको न्यूयोर्क, रेड हुकमा अवस्थित छ। संग्रहालय आधिकारिक वेबसाइट: www.oldrhinebeck.org.
प्रस्तावित दृश्यहरूमा फोटो कोरल बनावटहरू, सबै ह्याङ्गारहरू, सबै भवनहरू, सबै अवधारणात्मक वस्तुहरू जस्तै 1929 नयाँ मानक बाइप्लेन डी-25 सहित साइटमा अवस्थित पुराना विमानहरू AI द्वारा संचालित। यस दृश्यको गुणस्तरको स्तर ओर्बक्स उत्पादनको बराबर छ! Vintages विमानहरु को प्रशंसकहरु को लागि तपाईं यहाँ आफ्नो एयरशॉट बना सकते हो, तर न केवल, वास्तव मा यो एक राम्रो स्थान हो विस्तार मा यात्रा गर्न को लागि। थप विस्तृत जानकारीको लागि म्यानुअल पढ्नुहोस्।
त्यहाँ पुग्न कोड प्रयोग गर्नुहोस् NY94 क्षेत्रीय विमानस्थल आईडीमा।
वास्तविक संग्रहालयको भिडियो, तपाईंले पाउनुहुनेछ कि दृश्यहरू लगभग समान छ! धेरै सुन्दर काम।
डाउनलोड9682
सुनको आयु सिमुलेशन र एड वेल्स